दोस्रो आईपिएल क्रिकेटमा डेक्कन चार्जर्स ६ रनले बिजयी « Hamrosyangja.com :: syangja and waling bazaar latest news, people, photos and more.
२०७७ आषाढ २५, विहीवार ( नेपाली मिती )
« सुपारी चाम्रो नेपाली लोकगीत
मेरो सिरुबारी गाउंको यात्रा »
दोस्रो आईपिएल क्रिकेटमा डेक्कन चार्जर्स ६ रनले बिजयी
आईपिएल क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतवार भएको फाईनलमा डेक्कन चार्जर्सले रोयाल च्यालेन्जरलाई ६ रनले पराजित गरेको छ। गत बर्ष अन्तिम स्थानमा रहेको डेक्कन चार्जर्स गिलक्रिष्ट तथा आरपि सिंहको शानदार खेलले गर्दा यस बर्षको बिजेता बनेको छ।
टस् जितेर पहिला फिल्डिङ्ग गरेको रोयाल च्यालेन्जरले डेक्कन चार्जर्सलाई निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ४३ रनमा रोकेको थियो डेक्कन चार्जर्सको तर्फबाट ४ छक्का र ९ चौका प्रहार भएको थियो। १ सय ४४ रनको लक्ष्य पछ्याएको रोयाल च्यालेन्जरले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३७ रन मात्र बनाउन सक्यो। रोयाल च्यालेन्जरको तर्फबाट ५ छक्का र १० चौका प्रहार भएको थियो।
टस् जितेर पहिला फिल्डिङ्ग गरेको रोयाल च्यालेन्जरका कप्तान अनिल कुम्बलेले डेक्कन चार्जर्सका कप्तान गिलक्रिष्टलाई पहिलो ओभरमा ० रनमा बोल्ड गरेको थियो। चौथो ओभरमा सुमन १० रनमा विनय कुमारको बलमा पाण्डे द्वारा क्याच आउट भएको थियो। त्यसको लगतै द्रविदले साईमण्डसको ५ रनमा क्याच छोडेको थियो। सो जिवनदान पाएका साईमण्डसले गिव्ससंग मिलेर ४० रनको साझेदारि गरेका थिए। साईमण्डस रोयाल च्यालेन्जरका कप्तान अनिल कुम्बलेको बलमा ३३ रन बनाई बोल्ड भएको थियो।
३ विकेट गरमाएको डेक्कन चार्जर्सले त्यस पछि बिस्तारै खेलेको थियो। गिव्स र रोहित शर्माले डेक्कन चार्जर्सलाई सम्हालेर अगाडी बढाएका थिए। प्रविन कुमारले फालेको १५ औ ओभरमा यी दुईले ओभरमा २० रन बनाएका थिए। त्यस पछि १७ औं ओभरमा फेरि अनिल कुम्बलेले रोहित शर्मा तथा बेनु गोपाल रावलाई लाई क्याच आउट गराएका थिए। कप्तान कुम्बलेको अगाडि डेक्कन चार्जर्सका व्याट्सम्यानहरु निरहि देखिए।
डेक्कन चार्जर्सका गिव्सले अन्त सम्म सम्हालेर खेलेका थिए। उनले ४८ बलमा २ छक्का र ३ चौकाको मद्यतले ५३ रन बनाएका थिए। रोयाल च्यालेन्जरको तर्फबाट कप्तान अनिल कुम्बलेले ४ ओभरमा १६ रन दिएर ४ विकेट लिएका थिए। विनय कुमारलेपनि ४ ओभरमा २ विकेट लिएर कुम्बलेलाई साथ दिएको थियो। कप्तान अनिल कुम्बलेको खतरनाक बलिङ्गले गर्दा डेक्कन चार्जर्सले १ सय ४३ रन मात्र बनाउन सकेको थियो।
१ सय ४४ रनको लक्ष्य पछ्याएको रोयाल च्यालेन्जरले आफ्नो पारिको शुरुवात बिस्तारै गरेको थियो। आरपि सिंहले कालिसलाई प्लेड अन गराएर रोयाल च्यालेन्जरलाई २० रनमा पहिलो झट्का दिएको छ। कालिसले १७ बलमा १६ रन बनाएका थिए।
त्यस पछि पहिलो छ ओभरको फाइदा उठाउन भ्यान डे मर्वेले आक्रमक खेल खेलेका थिए। उनले पाचौ ओभरमा ह्यारिसलाई २ छक्का प्रहार गरेका थिए। खेलको सातौं ओभरमा अघिल्ला दुई खेलका नायक मनिष पाण्डेलाई ओझाले गिलक्रिष्ट द्वारा क्याच आउट गराएका थिए।
भ्यान डे मर्वेल आठौं ओभरमा साईमण्डसलाई फेरि छक्का पैहार गरेका थिए। नवौं ओभरमा भ्यान डे मर्वेलाई ओझाले गिलक्रिष्ट द्वारा स्टम्प आउट गराएका थिए। त्यस पछि द्रविद र टेलरले रोयाल च्यालेन्जरको पारि सम्हालेको थियो।
बाह्रौं ओभरमा द्रविदलाई हरमित सिंहले बोल्ड बनाएका थिए। तर रोस टेलरको आक्रमक व्याटिङ्गले रोयाल च्यालेन्जर बिस्तारै बिजय तर्फ अग्रसर भएको थियो। तर फेरि साईमण्डसले पन्ध्रौ ओभरमा टेलरलाई बेनु गोपाल रावको हातमा क्याच आउट तथा बिराट कोहलीलाई गिलक्रिष्ट द्वारा स्टम्प आउट गराई डेक्कन चार्जर्सलाई खेलमा फर्काएका थिए।
१६ औं ओभरमा हरमित सिंहले मार्क ब्रोचरलाई गिव्सको हातमा क्याच आउट गराई डेक्कन चार्जर्सलाई बिजय तर्फ लगेको थियो। हरेक ओभर पछि खेलमा नाटकिय परिवर्तन भएको थियो, कहिले डेक्कन चार्जर्स त कहिले रोयाल च्यालेन्जर बिजय तर्फ लागेको देखिन्थ्यो। सत्रौं ओभरमा प्रविन कुमारलाई ओझाले आरपी सिंहको हातमा क्याच आउट गराएका थिए।
खेलको दुई ओभर बाकी रहदा रोयाल च्यालेन्जरलाई २ विकेटमा २७ रन बनाउनु थियो। ह्यारिसले फालेको १९ औं ओभरमा रोयाल च्यालेन्जरले १२ रन बनाएतापनि हरमीत सिंहले शानदार क्याच लिई विनय कुमारलाई आउट गरका थिए।
आरपि सिंहको अन्तिम ओभरमा रोयाल च्यालेन्जरलाई जितको लागी १५ रन चाहेकोमा रोयाल च्यालेन्जरले ८ रन मात्र बनाउन सक्यो।
This entry was posted on Monday, May 25th, 2009 at 4:23 am	and is filed under खेलकुद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.